> Resource > Video > Sida loo yareeyo awoodda MKV
MKV, gaaban Matroska Video, waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in la qaybiyo clips Isladooda Sabtaytal. Waxaa laguu hayaa noocyada kala duwan ee files galay mid ka mid file. Tusaale ahaan, waxaa ku jiri kara faylasha subtitles, kuwan raadkaygay audio iyo duwan oo dhan hal file ku jira video kuwan raadkaygay. Taasi waxay ka dhigan tahay faylka MKV aad had iyo jeer waa mid aad u ballaaran. Si loo yareeyo tirada MKV, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxay kaa caawin kartaa. Waxaa si fudud u yarayn kartaa baaxadda MKV iyadoo la yaraynayo xallinta, video iyo heerka yara audio ama MKV Converter in qaab kale sida aad jeceshahay. Ma doonaysaa in ay tijaabiyaan? Just Raac tallaabooyinka hoose iyo in la yareeyo tirada MKV ku qasabno yar.
1 dejinta faylka MKV asalka
Download iyo abuurtaan Video Converter. Riix ah "Add Files" button iyo dhirta faylka MKV aad rabto in aad si loo yareeyo in suuqa kala xulashada file ka. Dooro item iyo riix "Open" badhanka si ay u shuban barnaamijka. Waxa kale oo aad iyaga si toos ah u soo jiidi kartaa galay uu furmo suuqa hoose.
2 Bilow yareeyo xajmiga MKV
Riix ah "Settings" button iyo suuqa kala barnaamij ah lagu daahfuri doonaa. Si aad u qabsato beegyada uu u gacanta, waxaad dooran kartaa dhinacyada ku arkaysid in ka yar faylka MKV asalka ah. Tusaale ahaan, guji "Rate Inyar" menu jiido hoos qaybta video ah oo ay yareeyaan xawaaraha nidaaminta. Isku samee "Rate Inyar" menu jiido hoos qaybta "Audio" ah. Converter video Tani waxay sidoo kale kuu saamaxayaa inaad si toos ah loo yareeyo xajmiga MKV. Si tan loo sameeyo, beddelaan si ay "Tirada yar" tab iyo riix "OK".
Talo: Si aad ah u yareyn size ee aad video, waxa kale oo aad u bedeli karaan faylka MKV asalka ah in qaab kale haddii qaab video waa mid ka mid ahaa walaacaaga. Si tan loo sameeyo, riix "Qaabka Output" image dhinaca midigta iyo baddal ah "Qaabka" tab iyo doortaan qaab saarka la jecel yahay.
Ka dib markii in, waxaad soo laaban doonaa si uu furmo suuqa hoose oo ay helaan in lagu qiyaasay baaxadda file ah file wax soo saarka waxa si wayn u dhimay marka la barbar dhigo mid ka mid ah asalka ah. Hadda waxaad riixi kartaa icon Play in ay ku eegaan natiijada saarka video ah.
3 dhoofinta ee video MKV dhimay
Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, riix "Beddelaan" badhanka si aad u bilowdo diinta faylka. Barnaamijku wuxuu muujin doonaa buugga file ee faylka Tifaftirayaasha saarka MKV markuu helo.
Dhab ahaantii, sida Converter feature buuxa, Wondershare Video Converter sidoo kale taageertaa video caan ah oo maqal ah oo ah qaabab kale oo ay ku jiraan TIVO, AVI, MP4, Mpg, MPEG, lowska, H.264, MP3, M4A, AC3, AAC, WMA regelingen,, OGG, daanyeer, MKA iyo in ka badan. Hadda download it iyo sahamin muuqaalada more of this video awood badan Converter!